Xisbiga Dimuquraadiga Soomaalida (XDS) Oo Qoraal Sas iyo Shaki Abuuraya Kasoo Saaray Xisbiga EPP Ee Shacabka Soomaalidu Ka Biyo Diidsan Yihiin - Jigjiga Online
HomeSomalidaXisbiga Dimuquraadiga Soomaalida (XDS) Oo Qoraal Sas iyo Shaki Abuuraya Kasoo Saaray Xisbiga EPP Ee Shacabka Soomaalidu Ka Biyo Diidsan Yihiin
Xisbiga Dimuquraadiga Soomaalida (XDS) Oo Qoraal Sas iyo Shaki Abuuraya Kasoo Saaray Xisbiga EPP Ee Shacabka Soomaalidu Ka Biyo Diidsan Yihiin
Jigjiga (JigjigaOnline) – Xisbiga haya talada Dawladda Deegaanka Soomaalida ee XDS ayaa soo saaray qoraal shaki gelinaya bulshada DDS oo horeba uu ugaga jiray mugdi iyo shaki xooggan.
Madaxweynaha Dalwadda Deegaanka Soomaalida Mustafe Muxumed Cumar, Guddoomiyaha xisbiga XDS Axmed Shide iyo madaxda xisbiga ayaan hore wax faahfaahin ah u siinin shacabka si ay macluumaad dheeraad ah uga siiyaan qaabka ay wax u socdaa iyo saamaynta togan ama taban ee xisbiga cusub ee EPP ee dalka maamuli doona uu ku yeelanayo.
Qoraal uu soo saaray Madaxa Xarunta Dhexe ee Xisbiga, Eng. Maxamed Shaale ayaa waxa uu ku sheegay in xisbigu uu go’aan ku qaadan doono danaha iyo doonista shacabka Soomaaliyeed, waxaana uu codsaday in lagu kalsoonaado xisbiga, laakiin muu sheegin waxyaabaha ay go’aanka ka qaadan doonaan ee haddaba aanay ka dhex muuqanin danta Soomaalidu.
Qoraalka Shaale ayaa waxa uu u dhignaa sidan:
Asc, Shacabka waxaan jeclaystay in aan la wadaago Qormo kooban oo kusaabsan Xisbiga Qaran
1. Sidaad ogsoon tihiin, 20kii sanno ee la soo dhaafay waxaa ay Xisbiyada bahwadaagta la ururka EPRDF ay codsanyeen in ay qayb ka noqdaan isbahaysiga talada dalka haya ee EPRDF.
2. Waxaa uu xisbiga EPRDF go’aamiyey in la sameeyo daraasad lagu midaynayo axsaabta bahwadaagta la ah EPRDF ee ka arrimiya deegaanada dalka.
3. Iyada oo laga duullayo fikirka midaynta axsaabta bahwadaagta EPRDF, waxaa hogaaminta sare iyo Guddiga fulinta loo soo bandhigay natiijadii daraasada ee ku aadanayd muhiimada midowga kadib waxaa la isla gartay in qaab-dhismedka xisbiga qaran ,barnaamijkiisa siyaasadeed iyo xeer-hoosadkiisaba dib loogusoo bandhigi doono hayadaha kale duwan ee Xisbiga.
4. Kadib hoggaaminta sare ee XDS, waxay la wadaageen Golaha Dhexe ee XDS wuxuuna Goluhu is ku waafaqnay mabada’a ahaan in ay muhiiim tahay in miiska lagu hayo talada dalka laga mid noqdo. Sidoo kale, waxaa uu Golaha Dhexe ee XDS dhigay shuruudo ay waajib tahay in ay ka muuqato xeer hoosaadka Xisbiga Qaran waxaana ka mid ah:
• Ilaalinta nidaamka Federaalka ee ku dhisan qowmiyadaha dalka.
• Ilaalinta xaqa ismaamulka dastuuriga ah ama talada deegaanku inay ka go’do shacabkeenna oo kaliya.
• Ku shaqaynta Afkeenna Hooyo.
• Qaabdhismeedka iyo xubnaha XDS in aan la burburin karin.
• In barnaamijka siyaasaddeed iyo xeer-hoosaadka Xisbiga Qaran uu waafaqsanyahay dhaqanka iyo hab nololeedka shacabka deegaanka Soomaalida.
• Dammaanad qaadka xuquuqda aan dalka ku leenahay in ay si cad uga dhex muuqan karto Xisbiga Qaran.
• Saami qaybsi siyaasaddeed oo u dhigma tirada shacabkeenna, baaxadda dhulkeena iyo faa’iidada istiraatijiyadeed ee aan dalka u leenahay in aysan qarsoodi iyo xaqiraad midna gali karin.
• In uu Afka Soomaligu kamid noqdo luuqadaha dawladda federaalku ku shaqayso iyo in aan si firfircoon uga qaybqaadano qaabdhismeedka heerarka kala duwan ee dawladda federaalka.
Intaasi waxay ahayd sooyaalka dadaalka XDS ee la xidhiidha saamaynta Xisbiga Qaran.
6. Sidaas iyada oo jirta, maalmahan xisbiga EPRDF kullan uu yeeshay wuxuu ka wadahadlay midowga Xisbiga Qaran, barnaamijka siyaasaddeed iyo xeer-hoosaadka Xisbiga Qaran wuxuuna u gudbiyey Golaha dhexe ee EPRDF barnaamijka Xisbiga Qaran si ay ugu wada dooddaan kadibna u ansixiyaan.
Kullanka Guddiga fulinta EPRDF waxa ka qayb galay Gudoomiyaha iyo Gudoomiye kuxigeenka XDS waxayna shirka ka dhex dhiibteen fikirkooda ku aadan Xisbiga Qaran.
7. Maanta waxaa furmay kullankii Golaha Dhexe oo aha Aqrinta qoraalada waxaana ka qayb galaya Madaxweyne Kuxigeenka DDS, Madaxa Xarunta Dhexe ee XDS iyo Wasiirka Biyaha DDS. Shirkan Golaha Dhexe ee EPRDF wuxuu socon doonaa 3 malmood.
8. XDS go’aankiisa la xidhiidha Xisbiga Qaran isaga ayaa u madaxbanaan mowqifkiisana waxaa weeye haddii xeer hoosaadka Xisbiga Qaran uu ka jawaabo shuruudihii Golaha dhexe ee XDS uu horay u dhigay, XDS wuxuu ku biirayaa Xisbiga Qaran.
XDS wuxuu u caddaynayaa shacabka Soomaaliyeed in uu ku go’aan qaadan doono danaha shacabka iyo doonitaanka shacabka soomaliyeed oo kaliya. Sidaas darteed, waxaan bulshada Soomaaliyeed ka codsanaynaa in ay kalsooni buuxda ku qabaan XDS.
By: Mohamed Shalle
Nin dhibaato uu dadka uga digi jiray isagii loo heysto